bot-Jagwar / Home / Home
Labels: fandraisana (1)
Authors: Tonga soa
Tonga soa eto amin'ny tetikasa Bot-Jagwar. Ny tanjon'ity tetikasa ity dia mitrandraka ny votoatin'ny Tranonkala mba hahafahantsika mamorona votoatiny eo amina firaketana votoatiny iray (ohatra : Wikipedia, na Wikibolana).
Ny fiteny fampisan'ny renifangon'i tetikasa Bot-Jagwar dia fiteny malagasy. Mety hitranga tsy ho ela ny tetikasa amin'ny fiteny anglisy ary frantsay.
Ny raki-baiko avy eto amin'ny tetikasa Bot-Jagwar dia mampiasa ny framework Pywikipedia. Ka noho izany dia ilaina anananao ilay framework aloha ny mampiasa ny framework an'i Bot-Jagwar.
Ankehitriny aloha i Bot-Jagwar dia mbola miankina amin'ny Framework an'i Pywikipediabot.
Fifandraisana ary fametrahana sosokevitra
Raha te-hametraka sosokevitra ianao dia mandefasa hafatra any amin'i rado.kaontywiki@gmail.com. Na tonga koa ianao dia afaka mametraka sosokevitra eto amin'ity wiki ity amin'ny alalan'ny famoronana pejy iray. Ataovy "sosokevitra" ny label an'ilay pejy dia amin'izay ho hitan'ny rehetra avokoa.
Afaka maka ny renifangon'i Bot-Jagwar ianao ao amin'ny petra-drakitra misy ny renifango. Izy ireo avokoa dia mitondra ny lisansa CC-By-SA, ka azonao ovaina ary zarazaraina araka ny sitra-ponao, araka ny fepetra apetrak'ilay lisansa.
Ireo mpiandraikitry ny fandrindrana ny tetikasa